अन्त नयाँ सुरुवात हो, वर्ल्डवाइड चर्च अफ गड स्विजरल्याण्ड (WKG)
यदि भविष्य नभएको भए, पावल लेख्छन्, ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु मूर्खता हो (२ कोरिन्थी १ 1:१:15,19)। भविष्यवाणी भनेको इसाई आस्थाको एक अत्यावश्यक र उत्साहजनक हिस्सा हो। बाइबल भविष्यवाणीले हामीलाई एकदमै आशाजनक कुरा बताउँछ। हामी यसबाट धेरै शक्ति र साहस प्राप्त गर्न सक्दछौं यदि हामी यसको मुख्य सन्देशहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्छौं, विवादमा जान सक्ने विवरणहरूमा होइन।
भविष्यवाणी को उद्देश्य
भविष्यवाणी आफैमा एक अन्त छैन - यो एक उच्च सत्य अभिव्यक्त गर्दछ। अर्थात्, कि परमेश्वर आफैले मानवता संग आफैलाई मिलाउनुहुन्छ, परमेश्वर; कि उहाँ हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ; कि हामीलाई फेरि परमेश्वरको साथी बनाउँछ। यो वास्तविकता भविष्यवाणी घोषणा। भविष्यवाणी घटनाहरूको पूर्वानुमान गर्नका लागि मात्र होइन, तर हामीलाई परमेश्वरमा पठाउन पनि अस्तित्वमा छ। यसले हामीलाई बताउँछ कि परमेश्वर को हुनुहुन्छ, उहाँ के हुनुहुन्छ, उहाँ के गर्नुहुन्छ र उहाँ हामीबाट के आशा गर्नुहुन्छ। भविष्यवाणीले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर मानिसलाई परमेश्वरसँग मिलाप गर्न आग्रह गर्दछ।
पुरानो नियमको अवधिमा धेरै विशिष्ट भविष्यवाणीहरू साँचो भएका छन्, र हामी पनि आउने आशा गर्दछौं। तर सबै भविष्यवाणीहरूको साथ, ध्यान बिल्कुलै भिन्न कुरामा केन्द्रित छ: छुटकारा - पापहरूको क्षमा र येशू ख्रीष्टको माध्यमबाट आएको अनन्त जीवन। भविष्यवाणीले हामीलाई देखाउँदछ कि ईतिहास ईतिहासको निर्देशक हुनुहुन्छ (दानियल :4,14:१); यसले ख्रीष्टमाथिको हाम्रो विश्वासलाई सुदृढ बनाउँछ (यूहन्ना १:14,29: २)) र हामीलाई भविष्यको लागि आशा दिन्छ (1Th4,13-18)
अन्य कुराहरू मध्ये, मोशा र अगमवक्ताहरूले ख्रीष्टको बारेमा लेखेका थिए कि ऊ मारिनेछ र उठाइनेछ (लूका २:24,27:२:46 र)) तिनीहरूले पनि येशूको पुनरुत्थान पछि हुने घटनाहरू जस्तै सुसमाचार प्रचार गर्ने भविष्यवाणी गरेका थिए (पद १ 47)
भविष्यवाणीले हामीलाई ख्रीष्टमा उद्धारको औंल्याउँछ। यदि हामी यसलाई बुझ्दैनौं भने, सबै भविष्यवाणीहरू हाम्रो लागि कुनै कामको छैनन्। केवल ख्रीष्ट मार्फत हामी राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दछौं जुन अन्त हुँदैन (दानियल:: १ 7,13-१-14 र २))
बाइबलले ख्रीष्ट र अन्तिम न्यायको फिर्तीको घोषणा गर्दछ, यसले अनन्त दण्ड र पुरस्कार घोषणा गर्दछ। त्यसो गर्दा, उनले मानिसहरूलाई देखाउँछन् कि मुक्ति आवश्यक छ र एकै साथ मुक्तिको सुरक्षितता आउनेछ। भविष्यवाणीले हामीलाई भन्छ कि परमेश्वरले हामीलाई उत्तरदायी ठहराउनुहुनेछ (यहूदा १ 14-१-15) कि उहाँ हाम्रो उद्धार होस् भन्ने चाहनुहुन्छ (२Pt2) र त्यो उसले पहिले नै हामीलाई रिडिम गर्यो (१ यूहन्ना १: १-२) यसले हामीलाई सबै खराबीलाई जित्न, सबै अन्याय र दुःखकष्टको अन्त हुनेछ भनेर आश्वासन दिन्छ (१ कोरिन्थी १:1:२:15,25; प्रकाश २१:))।
भविष्यवाणीले विश्वासीलाई सुदृढ पार्छ: यसले उसलाई भन्छ कि उसको प्रयास व्यर्थ हुँदैन। हामी सतावटबाट बचाइनेछौं, हामी धर्मी ठहरिनेछौं र पुरस्कृत हुनेछौं। भविष्यवाणीले हामीलाई परमेश्वरको प्रेम र वफादारीको सम्झना गराउँछ र हामीलाई उहाँप्रति वफादार रहन मदत गर्छ (२ पत्रुस:: १०-१-2; १ यूहन्ना:: २-।) भविष्यवाणीले हामीलाई ईश्वरका अदृश्य चीजहरू र उहाँसँगको हाम्रो अनन्त सम्बन्धको कदर गर्न चेतावनी दिन्छ।
जकरियाले भविष्यवाणीलाई पश्चात्तापको आह्वानको रूपमा दर्शाउँछन् (जकरिया १,1,3--4) भगवानले सजायको चेतावनी दिनुहुन्छ तर पश्चातापको आशा गर्नुहुन्छ। योनाको कथाको उदाहरणले देखाएझैं जब मानिसहरू उहाँतर्फ परिणत हुन्छन् तब परमेश्वर आफ्ना घोषणाहरू फिर्ता लिन तयार हुनुहुन्छ। भविष्यवाणीको लक्ष्य हामीलाई परमेश्वरमा परिवर्तन गर्नु हो, जो हाम्रो लागि अद्भुत भविष्य हुनुहुन्छ; हाम्रो गुदगुदी सन्तुष्ट पार्न, "रहस्य" फेला पार्नको लागि होईन।
आधारभूत आवश्यकता: सावधानी
बाइबलका भविष्यवाणीहरू कसरी बुझ्न सकिन्छ? केवल ठूलो सावधानीका साथ। राम्रो भविष्यवाणी "प्रशंसकहरु" झूटा भविष्यवाणी र गलत कुटिलतावाद संग सुसमाचार बदनाम छ। भविष्यवाणीको यस्तो दुरुपयोगको कारण कोही-कोहीले बाइबलको खिल्ली उडाउँदछन्, आफै ख्रीष्टको पनि हाँसो उडाउँदछन्। असफल भविष्यवाणीहरूको सूची यस्तो गम्भीर चेतावनी हुनुपर्दछ कि व्यक्तिगत विश्वासले सत्यलाई ग्यारेन्टी गर्दैन। किनभने गलत अनुमानले विश्वासलाई कमजोर बनाउन सक्छ, होसियार हुनै पर्छ।
आध्यात्मिक प्रगति र इसाई जीवनको लागि गम्भीरतासाथ प्रयास गर्न हामीले सनसनीपूर्ण भविष्यवाणीहरू हुनुपर्दैन। समय र अन्य विवरणहरूको ज्ञान (यदि तिनीहरू सही भए पनि मुक्तिको ग्यारेन्टी छैन)। हाम्रोलागि केन्द्रबिन्दु ख्रीष्ट हुनुपर्दछ, भलाइ र विपक्षमा होइन, यो वा त्यो विश्वशक्तिलाई "पशु" भनेर व्याख्या गरिनुपर्दछ।
भविष्यवाणीको लतको मतलब हामीले सुसमाचारमा थोरै मात्र जोड दिएका छौं। बाइबलको भविष्यवाणीमा अमेरिकाले सम्बोधन गरेको होस् वा नहोस्, एक हजार वर्ष पछि आउनेछ, ख्रीष्टको आगमन नजिकै छ कि छैन भनेर मानिसले पश्‍चात्ताप गर्नुपर्छ र ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुपर्छ।
भविष्यवाणीलाई व्याख्या गर्न किन यत्तिको गाह्रो छ? सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण त्यो प्रतीकहरूमा धेरै पटक बोल्दछ। मूल पाठकहरूले प्रतीकहरूको अर्थ के हो भनेर थाहा पाउँदछन्; किनकि हामी फरक संस्कृति र समयमा बाँचिरहेका छौं, व्याख्या हाम्रो लागि अझ समस्यापूर्ण छ।
प्रतीकात्मक भाषाको उदाहरण: १ 18 औं भजन। कवितात्मक रूपमा उनले वर्णन गरे कि कसरी परमेश्वरले दाऊदलाई उसको शत्रुहरूबाट बचाउनुभयो (पद १ 1) डेभिडले यसको लागि बिभिन्न प्रतीकहरू प्रयोग गर्दछ: मृतकको क्षेत्रबाट भाग (-4--6), भूकम्प ()), आकाशमा चिन्ह लगाउनुहोस् (१०-१-10), समस्याबाट पनि एक उद्धार (16-17)। यी चीजहरू वास्तवमै भएको छैन, तर प्रतीकात्मक र कवितापूर्वक लाक्षणिक अर्थमा प्रयोग गरिन्छ केही तथ्यहरूलाई कल्पना गर्न र तिनीहरूलाई "दृश्यात्मक" बनाउन। यो भविष्यवाणी गर्छ।
यशैया :०: 40,3-4-। ले पहाडहरू गिराउने, सडकहरू बनाउने कुरा गरेको छ - त्यो शाब्दिक रूपमा होइन। लूका:: -3,4-। ले यो भविष्यवाणी बप्‍तिस्मा दिने यूहन्नाले पूरा गरेको संकेत गर्दछ। यो पहाड र सडकको बारेमा थिएन।
योएल:: १-२ ले भविष्यवाणी गर्दछ कि परमेश्वरको आत्मा "सबै मानिसमाथि" खन्याइनेछ; पिटरका अनुसार पेन्टेकोस्टमा केही दर्जन व्यक्तिहरूसँग यो काम पूरा भइसकेको थियो (प्रेरित:: २०-२१) योएलले भविष्यवाणी गरेका सपना र दर्शनहरू तिनीहरूको शारीरिक विवरणहरूमा हरेक विवरणमा जान्छन्। तर पत्रुसलाई बाह्य संकेतहरू लेखा सर्तमा पूरा गर्न आवश्यक पर्दैन - र हामीले त्यो पनि गर्नुहुन्न। यदि हामी इमेजरीसँग काम गर्दैछौं भने भविष्यवाणीको सबै विवरणहरूको कुनै मौखिक प्रविष्टि अपेक्षित हुँदैन।
यी विवादहरूले बाइबल भविष्यवाणीहरूको व्याख्या गर्ने तरिकालाई असर गर्छ। एक पाठकले शाब्दिक व्याख्यालाई प्राथमिकता दिन सक्छ, अर्कोले लाक्षणिक अर्थ लगाउन सक्छ, र कुन सही छ भनेर प्रमाणित गर्न असम्भव हुन सक्छ। यसले हामीलाई ठूलो तस्बिर हेर्नको लागि बाध्य पार्छ, विवरणहरू होइन। हामी फ्रोस्टेड गिलासमार्फत हेर्छौं, एक म्याग्निफाइ। गिलास मार्फत होइन।
भविष्यवाणीका धेरै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा ईसाई सहमति छैन। त्यसैले z z प्रबल। बी। र्याप्चर, ठूलो समस्या, सहस्राब्दी, मध्यवर्ती राज्य र नरक बिभिन्न बिचारको विषयमा। व्यक्तिगत राय यति महत्त्वपूर्ण छैन। यद्यपि तिनीहरू ईश्वरीय योजनाको अंश हुन् र भगवानका लागि महत्त्वपूर्ण छन्, यद्यपि हामीले सबै सही उत्तरहरू यहाँ पाउनु आवश्यक छैन - विशेष गरी यदि तिनीहरूले हामी र बिभिन्न तरिकाले सोच्नेहरूको बिचमा मतभेद छर्दछ भने। हाम्रो दृष्टिकोण व्यक्तिगत पोइन्टमा पोख्त हुनु भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ।
हुनसक्छ हामी एक भविष्यवाणी भविष्यवाणी तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई थाहा छैन हाम्रो लक्ष्य कहाँ छ, कसरी र कुन गतिमा हामी त्यहाँ पुग्दैछौं। हामीलाई सबैभन्दा बढि चाहिने कुरा भनेको हाम्रो "यात्रा गाईड", येशू ख्रीष्टमा भरोसा राख्नु हो। उहाँ मात्र एक हुनुहुन्छ जसले बाटो जान्नुहुन्छ, र यो बिना हामी पथभ्रष्ट हुन्छौं। हामी उहाँमा टाँसौं - उसले विवरणको ख्याल राख्छ। यी शगुनहरू र रिजर्भेसनहरू दिमागमा राख्दै हामी अब केही आधारभूत इसाई सिद्धान्तहरू विचार गर्न चाहन्छौं जुन भविष्यसँग सम्बन्धित छ।
भविष्यको बारेमा हाम्रो शिक्षालाई निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण कुञ्जी घटनाचाहिँ ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हो। उहाँ फिर्ता आउनुहुनेछ भनेर लगभग पूर्ण सम्झौता छ। येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई "फेरि आउनुहुनेछ" भनेर घोषणा गर्नुभयो (यूहन्ना १:14,3:१) साथै, उहाँले चेलाहरूलाई मिति गणनाको साथ आफ्नो समय खेर फाल्ने बिरूद्ध चेतावनी पनि दिनुभयो (मत्ती 24,36।।) समय नजिक छ भनेर विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई आलोचना गर्नुहुन्छ (मत्ती २:: १-१-25,1), तर ती पनि जसले लामो ढिलाइमा विश्वास गर्दछन् (मत्ती १०: १ -24,45 -२०) नैतिकता: हामी जहिले पनि तयार हुनुपर्दछ, हामी तयार हुनुपर्दछ, त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो।
स्वर्गदूतहरूले ती चेलाहरूलाई भने: येशू स्वर्ग जानुभएपछि उहाँ फेरि आउनुहुनेछ भन्ने कुरा निश्चित छ (प्रेरित १:)) उसले स्वर्गबाट ​​आगोको ज्वालामा आफ्नो शक्तिका दूतहरूको साथ आफूलाई प्रकट गर्दछ » (२ थिस्सलोनिकी १: --2) पावलले यसलाई "महान् परमेश्वर र हाम्रो मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको महिमाको उपस्थिति" भनेका छन् (तीतस १,।)। पत्रुसले “येशू ख्रीष्ट देखा पर्नुहुनेछ” को पनि कुरा गरे (१ पत्रुस १:;; पद १ 1 पनि हेर्नुहोस्), यूहन्नाले जस्तै (१ यूहन्ना :1:१:2,28)। त्यस्तै हिब्रूहरूलाई लेखेको पत्रमा: येशू "दोस्रो पटक" उहाँसँगै देखा पर्नुहुनेछ "जो उहाँबाट उद्धारको निम्ति पर्खिरहनुभएको छ" (9,28)। त्यहाँ "चर्को आवाज", "परमेश्वरको तुरही" को चर्को स्वरमा "आदेश" को कुरा छ (२ थिस्सलोनिकी 2..4,16) दोस्रो आउने स्पष्ट हुन्छ, देख्न योग्य र श्रव्य हुन्छ, अकल्पनीय हुनेछ।
यो दुई अन्य घटनाहरूको साथ हुनेछ: पुनरुत्थान र न्याय। पावल लेख्छन् कि प्रभु आउनुहुँदा मृतकहरू ख्रीष्टमा पुनरुत्थान हुनेछन्, र यही समयमा जीवित विश्वासीहरूलाई हावामा खडा गरी प्रभुलाई भेट्न आउनुहुनेछ। (२ थिस्सलोनिकी १: --2) "किनभने तुरही बज्नेछ," र पावलले मरेका छन्, र बौरिउठेर उठ्नेछन् र हामी परिवर्तन हुनेछौं "। (२ कोरिन्थी १ 1:१:15,52)। हामी परिवर्तनको क्रममा छौं - हामी "गौरवशाली", शक्तिशाली, अविनाशी, अमर र आध्यात्मिक छौं (V. 42-44)
मत्ती २:24,31:१ ले यसलाई अर्कै दृष्टिकोणबाट वर्णन गरेको देखिन्छ: "र [क्रिस्टले] चहकिलो तुरहीको साथ आफ्ना दूतहरू पठाउँनेछ, र उनीहरूले आफ्ना चुनिएका जनहरूलाई चारै दिशाबाट एक छेउदेखि अर्को छेउमा भेला गर्नेछन्।" सामाको उखानमा येशू भन्नुहुन्छ कि युगको अन्त्यमा उसले "आफ्ना दूतहरू पठाउनेछ र तिनीहरूले उहाँको राज्यबाट खेर फाल्ने सबै थोक भेला गर्नेछन्, र जसले खराब गर्छन् र तिनीहरूलाई भट्टीमा फालिदिन्छन्।" (मत्ती १०: १ -13,40 -२०)
"किनकि यस्तो हुनेछ कि जब मानिसका पुत्र आफ्ना पिताको महिमामा आफ्ना दूतहरूसँग आउनेछन्, र तब उसले सबैलाई उसले के गर्‍यो भनेर प्रतिफल दिनेछ"। (मत्ती 16,27।।) Servant of। The। The to।।। Servant। Servant servant the the the the servant विश्वासी नोकरको दृष्टान्तमा प्रभु फर्किन्छ (मत्ती २:: -24,45 51-१) र तिनीहरूलाई सुम्पिएको एन्ट्रेन्टहरूको दृष्टान्तमा (मत्ती २:: १-25,14--30०) न्याय पनि।
जब प्रभु आउँछन्, पावलले लेख्दछन्, "उसले अन्धकारमा लुकेका कुराहरूलाई पनि प्रकाश पार्नेछ" र हृदयको पछि लाग्ने कुरा प्रकट गर्दछ। तब सबै मानिसहरूले परमेश्वरबाट प्रशंसा पाउनेछन्। (२ कोरिन्थी १ 1:१:4,5)। Natürlich kennt Gott jeden Menschen schon, und insofern hat das Gericht schon lange vor Christi Wiederkunft stattgefunden. Aber es wird dann erstmals «öffentlich gemacht» und vor aller Ohren verkündet werden. Dass uns neues Leben geschenkt wird und dass wir belohnt werden, ist eine ungeheure Ermutigung. Am Schluss des «Auferstehungskapitels» ruft Paulus aus: «Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus Christus! Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn» (१ कोरिन्थी १२: -1-।)
चासो जगाउन, भविष्यवाणी शिक्षकहरू सोध्न मनपराउँछन्: "के हामी पछिल्ला दिनमा बाँचिरहेका छौं?" सहि उत्तर "हो" हो - र यो २००० बर्षदेखि सहि छ। पत्रुसले विगतका केही दिनहरूको बारेमा एउटा भविष्यवाणी उद्धृत गरे र आफ्नै समयमा लागू गर्दछन् (प्रेरित २: १-2,16-१-17), हिब्रूहरूलाई लेखेको पत्रका लेखकले जस्तै (हिब्रू १०: २)) केही मानिसहरू सोचे भन्दा अन्तिम केहि दिनहरू धेरै लामो भयो। युद्ध र आवश्यकताले हजारौं बर्षदेखि मानवतालाई पिरोलेको छ। के यो कुनै नराम्रो हुनेछ? हुनसक्छ त्यस पछि यो अझ राम्रो हुन सक्दछ र त्यसपछि फेरि नराम्रो। वा यो केहि मानिसहरूका लागि राम्रो र अरुको लागि खराब हुन्छ। इतिहास भर मा, "दुख सूचकांक" माथि र तल सारिरहेको छ, र यो जारी छ जस्तो छ।
तथापि, बारम्बार, केही इसाईहरूले स्पष्ट रूपमा "पर्याप्त" खराब गर्न सक्दैनन्। तिनीहरू ठूलो संकष्ट पछि लगभग तिर्खाएका छन्, संसारमा अबसम्म सबैभन्दा डरलाग्दो आपतकालिन समय भनेर वर्णन गरिएको छ (मत्ती 24,21।।) तिनीहरू एन्टिक्राईष्ट, "पशु", "पापको मानिस" र परमेश्वरका अन्य शत्रुहरु द्वारा मोहित छन्। हरेक डरलाग्दो घटनाहरूमा तिनीहरू नियमित तवरले एउटा संकेत देख्दछन् कि ख्रीष्ट चाँडै आउनुहुनेछ।
यो सत्य हो कि येशू डरलाग्दो स of्कष्टकालको समय हुनुहुन्थ्यो (वा: ठूलो दु: ख) को भविष्यवाणी (मत्ती २:24,21:२१), तर उनले भनेका धेरैजसो घटनाहरू of० मा यरूशलेमको घेराबन्दीको समयमा सम्पन्न भएको थियो। येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई यस्ता चीजहरूको बारेमा चेताउनी दिनुहुन्छ जुन उनीहरूले अझै अनुभव गर्नुपर्दछ; उदाहरण को लागी ख) कि यहूदियाका मानिसहरू पहाडहरूतिर भाग्नु आवश्यक थियो (V. 16)
येशूले आफ्नो फिर्ता सम्म निरन्तर आपतकालिन समयको भविष्यवाणी गर्नुभयो। "तपाईं संसारमा समस्यामा हुनुहुन्छ," उनले भने (यूहन्ना १:16,33:।, भीड अनुवाद)। येशूका विश्वासको कारण उनका धेरै चेलाहरूले आफ्नो जीवन बलिदान दिए। परीक्षाहरू इसाई जीवनको भाग हुन्; भगवानले हाम्रा सबै समस्याहरूबाट हामीलाई जोगाउनुहुन्न (प्रेरित १:14,22:२२; २ तिमोथी :2:१२; १ पत्रुस :3,12:१२)। त्यसबेला पनि प्रेषितहरूको समयमा एन्टिक्राइष्टहरू काममा थिए (१ यूहन्ना २:१:1 र २२; २ यूहन्ना 2,18)।
के भविष्यमा महासulation्कष्टको भविष्यवाणी गरिएको छ? धेरै इसाईहरू यो विश्वास गर्छन्, र हुनसक्छ तिनीहरू ठीक छन्। तर संसारभरि लाखौं मसीहीहरू पहिले नै सताइएका छन्। धेरै मारिए। ती प्रत्येकको लागि, समस्या पहिलेको भन्दा कुनै पनि खराब पाउन सक्दैन। दुई सहस्राब्दी को लागि ख्रीष्टियनहरुमाथि डरलाग्दो समय आएको छ। हुनसक्छ यो महासulation्कष्ट धेरै मानिसहरूले सोचे भन्दा लामो समयसम्म चलेको छ।
हाम्रा इसाई कर्तव्यों उस्तै रहेन, चाहे स whether्कष्ट नजिक छ वा टाढा छ - वा यो शुरू भैसक्यो। भविष्यको बारेमा अनुमानले हामीलाई अझ ख्रीष्टको जस्तै बन्न मद्दत गर्दैन, र यदि यसलाई दबाबको माध्यमको रूपमा प्रयोग गरी मानिसहरूलाई पश्चात्ताप गर्न आग्रह गर्दछ भने, यो दुरुपयोग हुनेछ। जसले समस्याको बारेमा अनुमान लगाउँदछन् उनीहरूको समयको सदुपयोग गर्दै छन।
प्रकाश २० मा ख्रीष्ट र सन्तहरूको एक हजार वर्षीय शासनको बयान गरिएको छ। केही इसाईहरूले यसलाई शाब्दिक रूपमा एक हजार वर्षको राज्यको रूपमा बुझ्दछन्, जुन ख्रीष्टले आफ्नो आगमनमा स्थापना गर्नुहुन्छ। अरू इसाईहरूले "हजार वर्ष" लाई प्रतीकात्मक रूपमा देख्दछन्, चर्चमा ख्रीष्टको शासनको प्रतीकको रूपमा, उहाँ फर्किनु भन्दा पहिले।
संख्या हजार बाइबलमा प्रतीकात्मक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ (Deut,,;; भजन ,०,१०), र यो शाब्दिक प्रकाश मा लिनु पर्छ भनेर कुनै प्रमाण छैन। प्रकाश असाधारण चित्रण शैलीमा लेखिएको छ। अरू कुनै पनि बाइबल पुस्तकले ख्रीष्टको आगमनमा स्थापना हुने समय-सीमित राज्यको कुरा गर्दैन। यसको ठीक विपरीत, दानियल २::5 जस्ता पदहरूले पनि साम्राज्य १००० वर्ष पछि कुनै पनि संकटबिना अनन्त रहनेछ भनेर सुझाव दिन्छ।
यदि त्यहाँ ख्रीष्टको आगमन पछि हजारौं राज्य छ भने, दुष्ट उठाइनेछ र धर्मीहरूलाई हजार वर्ष पछि इन्साफ गरिनेछ (प्रकाश :20,5:१)। यद्यपि, येशूका उखानहरूले समयको अन्तरालमा त्यस्तै भिन्नता रहेको देखाउँदैन (मत्ती २:: -25,31१--46; यूहन्ना:: २ 5,28-२29) सहस्राब्दी भनेको ख्रीष्टको सुसमाचारको भाग होइन। पावल लेख्छन् कि धर्मी र अभक्तहरू एकै दिनमा पुनरुत्थान हुन्छन् (२ थिस्सलोनिकी १: --2)
यस विषयमा अन्य धेरै व्यक्तिगत प्रश्नहरू छलफल गर्न सकिन्छ, तर यो आवश्यक छैन। वृत्तचित्र सन्दर्भ उद्धृत दृश्य प्रत्येकको लागी फेला पार्न सकिन्छ। मिलेनियममा व्यक्तिले जेसुकै विश्वास गर्न सक्ने भए पनि एउटा कुरा भने पक्का छ: प्रकाश २० अध्यायमा उल्लेख गरिएको समयको अन्त्य हुनेछ, र त्यसको पछाडि नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी, अनन्त, गौरवशाली, ठूला, उत्तम र मिलेनियम भन्दा लामो हुनेछ। त्यसकारण जब हामी भोलीको अद्भुत संसारको बारेमा सोच्दछौं, हामी अनन्त, उत्तम राज्यमा ध्यान दिन रुचाउँदछौं, अस्थायी चरणमा होइन। हामीसँग अगाडि हेर्ने अनन्तता छ!
यो कसरी हुनेछ - अनन्तसम्म? हामी केवल यो कुरा जान्दछौं जुन टुक्राहरूमा (१ कोरिन्थी १ 1:;; १ यूहन्ना:: २) किनकि हाम्रा सबै शब्दहरू र विचारहरू आजको संसारमा आधारित छन्। येशूले हाम्रो अनन्त इनामलाई धेरै तरिकाहरूमा उदाहरणसहित वर्णन गर्नुभयो: यो धन सम्पत्ति पाउन वा धेरै चीजहरूको स्वामित्व लिनु वा राज्यमा शासन गर्नु वा विवाह भोजमा भाग लिनु जस्तै हो। यी केवल अनुमानित वर्णनहरू छन् किनकि त्यहाँ तुलनात्मक केहि छैन। परमेश्वरसँग हाम्रो अनन्तता शब्दहरूले भन्न सक्ने भन्दा अझ सुन्दर हुनेछ।
डेभिडले यो कुरा यसरी राख्छ: you तपाईको अघि खुशी तपाईको दाहिनेतर्फ सदाको लागि आनन्द र खुशी हुन्छ। (भजन .16,11..XNUMX) अनन्तकालको उत्तम अंश परमेश्वरसँग रहनुहुनेछ; उहाँ कसरी हुनहुन्छ; ऊ वास्तवमै के हो भनेर उहाँलाई हेर्न; उहाँलाई राम्ररी चिन्न र चिन्न (१ यूहन्ना :1:१:3,2)। यो हाम्रो अन्तिम लक्ष्य र ईश्वरीय इच्छाको अस्तित्व हो, र यसले हामीलाई संतुष्ट पार्छ र अनन्त आनन्द दिन्छ।
र १०,००० वर्षमा, हामी भन्दा करोडौं हामीसँग, हामी आज हाम्रो जीवनमा फर्केर हेर्नेछौं र हामीले भोगेका चिन्ताहरू मुस्कुरायौं र हामी मर्नेछौं जब परमेश्वरले आफ्नो काम कति छिटो गर्नुभयो सोच्नुहोस्। यो भर्खरै शुरू भएको थियो र त्यहाँ कुनै अन्त हुनेछैन।